आमालाई छिमेकीले कु’टीकु’टी मा’र्यो ! बाउ पनि छैन म टुहुरा भएँ (भिडियो सहित) - Nepal Insider
आमालाई छिमेकीले कु’टीकु’टी मा’र्यो ! बाउ पनि छैन म टुहुरा भएँ (भिडियो सहित)
March 19, 2020 1165
कगेश्वोरी मनहराको जडिबुटीमा फेरी एउटा ड’रलाग्दो घ’टना घटेको छ । जडिबुटीस्थित सुकुम्बासी बस्तिमा बस्दै आएकी एक महिला झु’न्डिएको अवस्थामा फे’ला परेकी छिन् । आज बिहिबार बिहान करिब ५ बजे सुकुम्बासी बस्तिमा बस्ने अन्दाजी ३० वर्षीया महिला बिमला राई झु’न्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । मृतकबिमलाका एक मात्र सन्तान छोरा अनिश राईले २ दिन अगाडी कुकुरले मासु खाइदीएको निहुँमा करिब ५ जना महिलाले उनीमाथि कु’टपि’ट गरेको बताएका छन् ।
आफ्नै घरभित्रको कोठामा एउटा खुट्टा भुँइमा र अर्को खुट्टा खाटमा भएको अवस्थामा शलले पा’सो लगाएको अवस्थामा आज बिहान उनको श’व फेला परेको छ । आफुमाथि हा’तपा’त गर्ने महिलालाई कारवाहीको अपिल गर्न प्रहरी प्रशासन पुगेकी उनले न्याय नपाएपछि आ’त्मह’त्याको बाटो रोजेको हुनसक्ने पनि बताईएको छ । तर, स्थानीय प्रतक्षदर्शीका अनुसार उनको आ’त्मह’त्या नभई ह’त्या भएको बताएका छन् ।
स्थानीय प्रतक्षदर्शीका अनुसार उनले आ’त्मह’त्या गरेको हो या उनको ह’त्या भएको हो भन्नेमा संका लागेको बताएका छन् । मृ’तकमाथि कु’टपि’ट गरेका ३ जना महिलाहरुलाई प्रहरीले प’क्राउ गरि लगेको छ । अहिले उनको श’व पो’ष्टमा’र्टमका लागि अस्पताल लागिएको जनाइएको छ। घ’टनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर थप अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएका छन् । बाँकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोला :
Prevजिवेशलाई आरोप लाउँदै रियाशा रुदै आएपछि जिवेश पनि मिडियामा ! भने- पहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर, रियाशा (भिडियो हेर्नुस)
Nextकोरोनाको असर लोकसेवा आयोगमा सबै परीक्षा स्थगित गर्दै जारी गर्यो यस्तो जानकारी सुचनासहित
खुशीको खबर , माघ ४ गते देखि हराईरहेकी कल्पना चौधरी यस्तो अबस्थमा भेटीईन !